Fanamarihana noforonina tao amin'ny iOS 15 sy macOS 12 betas dia mety tsy hiseho amin'ny kinova taloha | Vaovao IPhone
Ao amin'ny fahavaratry ny iOS 15 betas, fahavaratra izay, toy ny mahazatra, dia afaka mitsapa ny vaovao rehetra mivoaka avy amin'ny rafitra fiasa manaraka ho an'ny finday Apple. Efa manana ny beta ampahibemaso voalohany eto amintsika isika, ary antenaina fa tsy ho ela dia afaka manomboka manandrana ny beta fahatelo an'ny iOS 15 ho an'ny mpamorona. Nefa tadidio ny zava-dehibe indrindra, miatrika kinova beta izahay, izany hoe, kinova fitsapana ka azo inoana fa hahita olana hafa amin'ny fiasan'ny fitaovanao ianao. Raha miresaka olana, dia maneho hevitra ao amin'ireo tambajotra izay Ny naoty namboarina tao amin'ny iOS 15 na macOS 12 dia mety tsy hiseho amin'ireo kinova taloha ... Tohizo ny famakiana fa omenay anao ny antsipiriany rehetra momba an'io olana io.
Raha ny fahitana azy, ny olana dia miankina amin'ny fahafaha-manonona ireo mpampiasa amin'ny naoty zaraina momba ny iOS 15, fampiasa vaovao izay ahafahantsika miasa miaraka amin'ireo mpampiasa rehetra mizara naoty. Mazava ho azy fa tsy fiasa izay ananantsika tamin'ny kinova taloha io ary amin'izao fotoana izao dia mpampiasa maromaro no hanao tatitra miaraka amin'ireo naoty izay mampiasa ireo fiasa vaovao ireo. Araka ny notaterin'ny 9to5Mac, raha ny fampiharana Ny Notes dia mamantatra fitaovana iray ao amin'ny kaonty iCloud anay izay misy kinova alohan'ny iOS 14.5 na macOS 11.3, hampandre anay izy ireo fa ireo naoty voamarika na ny Takona amin'ireo fitaovana ireo ny naoty misy firesahana. Raha havaozina amin'ny iOS 14.5 na macOS Big Sur 11.3 ny fitaovantsika, dia azo aseho koa ireo naoty izay mampiasa fitanisana na marika.
Mazava ho Apple dia maniry ny hitazomana ny fitaovantsika havaozina, ary ny fanarahana ny kinova taloha dia mety hiteraka olana. Na izany aza, tsarovy fa ny iOS 15 na macOS 12 dia ao amin'ny kinova beta ary izany mandra-pamoahana ny kinova farany dia tsy hohamarininay ny toetra mampiavaka azy izay tavela amin'ireo kinova taloha na izay tsy hiseho amin'ny kinova taloha rehefa manamboatra azy amin'ny kinova farany izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Fanamarihana noforonina tao amin'ny iOS 15 sy macOS 12 betas dia mety tsy hiseho amin'ny kinova taloha
Ireo mpanamboatra fitaovana dia lany ny tahiry kapila famandrihana Apple Watch